Nhau - Makorokoto anodziya kuna SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD pfuura nepakati peFSC sisitimu yekuongorora uye ubvumirwe chitupa chitsva cheFSC.
Kukwazisa kwoushamwari kuSHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD pfuura nepakati peFSC sisitimu yekuongorora masango uye unobvumidza chitupa chitsva cheFSC.
Kukwazisa kwoushamwari kuna Shandong HUIYANG INDUSTRY CO., LTD pfuura nepakati peFSC sisitimu yekuongorora uye ubvumirwe chitupa chitsva cheFSC.
Certification yemasango, inozivikanwawo sehuni chitupa, chishandiso chekushandisa nzira dzemusika kusimudzira manejimendi manejimendi manejimendi uye kuzadzisa zvinangwa zvehupenyu, zvemagariro pamwe nehupfumi. Zvekuratidzwa kwemasango, mumwe anogona kunatsiridza nzvimbo yekusimudzira yemabhizimusi pachawo, imwe yacho kuwedzera kukwikwidza mukana, kuburikidza nekusimbisa manejimendi manejimendi uye manejimendi manejimendi emabhizinesi ekuchengetedza kana kuwedzera mugove wemusika, nepo uchikwanisa kuburitsa zvakasiyana zvigadzirwa, chechitatu kusimudzira chimiro chemagariro chemabhizinesi, kubatsira mabhizinesi kuwedzera nzira dzepasirese, kuwana rutsigiro rwakawanda, uye chechina, simbisa manejimendi manejimendi uye manejimendi manejimendi emabhizinesi.
Shandong HUIYANG INDUSTRY CO., LTD yakafanana neFSC yakasimbiswa fekitori kweanopfuura makore mapfumbamwe.
Kubudirira kuwana chitupa cheFSC chitupa kunoreva kuti kambani yakapasa misimboti uye zviyero zvezvakatipoteredza, zvemagariro uye zvehupfumi zvakatemerwa FSC, isa stock yakanaka mukutenga, tenga zvigadzirwa pamwe neFSC chitupa chiratidzo, dzivisa kutenga zvigadzirwa kubva pamuti uri panjodzi zvisikwa kana kutema zvisiri pamutemo, uye vimbisa vatengi kuti zvigadzirwa zvinobva mumasango anosangana nemagariro, hupfumi uye zvisikwa zvezvinodiwa zvemazera azvino neanotevera, uye zvakare anotsigira Greenpeace.
Kwenguva yakareba, Shandong HUIYANG INDUSTRY CO., LTD kuomerera pane pfungwa yekugadzira zvigadzirwa zvehuni zvakanyanya kugarisana, zvakatipoteredza, zvine hutano, zvigadzirwa zvayo nemhando yepamusoro uye basa rakanaka, rinofarirwa nevatengi vedu.
Mune ramangwana, kambani inesimba kusimudzira chikonzero chekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuitira kuchengetedza kwezvakatipoteredza kuti vape simba ravo.
Ketani yekambani yekutarisa inovhara yakazara izere zvigadzirwa, zvigadzirwa zvinotengeswa kumba uye kunze kwenyika panguva imwe chete.
Semunhu ane chitupa cheFSC, Tinogamuchira shamwari dzedu dzese nevatengi pasi rese kuti vatarise chitupa chedu cheFSC paFSC yepamutemo webhusaiti: http://info.fsc.org/.